Fanafintohinana Noho Ny Fanararaotana Ankizy Maro Mampihozongozona Orina Tiorka Iray Mpanasoa Sady Mpomba Ny Governemanta · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Avrily 2016 4:31 GMT
Pikantsary avy amin'i Ensar.org mampiseho ny Filoha Erdogan niteny tao amin'ny Fivoriana Fihaonamben'ny Orina Mpanasoa faha-37 tamin'ny 27 Febroary 2016.
Tamin'ny fiandohan'ny volana martsa, nisy tantara ratsy nivoaka mahakasika ilay fikambanana mpanao fiantràna ara-panabeazana mpandala nentin-drazana akaiky ny fitondrana Tiorka sy ny fiampangana fanararaotana ara-nofo am-polony maro amin'ny zatovolahy tsy ampy taona.
Raha nandà ny governemanta ny hanapaka ny gaborarak'ilay orina mpanasoa, dia efa nanolotra ny fanasana ny mpanohitra – taorian'ny tsindry faneren'ny vahoaka – mba hanorina vaomiera parlemantera tompon'andraikitry ny fanadihadiana ny tranga misy manaraka amin'ny fihoaram-pahefana atao amin'ny ankizy ao amin'ny firenena.
Ny fandraràna tanteraka ny haino aman-jery fitaterana ny fanadihadiana hatramin'ny 14 Martsa dia nanamaizina zavatra maro amin'ny tranga misy, saingy mahatsiravina ireo antsipirihany izay efa nipoitra.
Tamin'ny 12 Martsa, nipoaka ny vaovao fisamborana mpampianatra iray ahiahiana ho nanolana, fara fahakeliny mpianatra lahy 10 tsy ampy taona, araka ny lazain'ny polisy sy ny mpampanoa lalàna an'ny fanjakana.
Nanomboka niresaka momba ireo 45 niharam-boina, teo anelanelan'ny sivy sy folo taona, ny haino aman-jery, anisan'izany ny haino aman-jery mpanohana ny fitondrana, na dia voaràra aza ny haino aman-jery tsy hiresaka ny fanadihadiana ao anatin'ny tapa-bolana, tsy fantatra marina ny loharano nahazoana io isa io.
Nosamborina ny 4 Martsa ilay mpampianatra, antsoin'ny ankamaroan'ny haino aman-jery hoe MB, fa nanolana mpianatra nijanona na nanatrika ny fianarana any an-trano tao an-tanànan'i Karaman any atsimo afovoan'i Torkia, ary ninoana fa niaiky ho meloka.
Ireo efitra ireo dia nofaina sy niasan'ny orina mpanasoa mpandala ny nentin-drazana roa, ny Ensar Fanorenana sy ny Orina Mpanasoan'ny Nahazo Diplaoman'ny Sekoly Ambony Arak'Asa ao Karaman (KAIMDER).
Fikambanana tsy miankina iray mana-namana matanjaka
Niroborobo taorian'ny naneken'ny governemanta azy tamin'ny taona 2012 ho “miasa soa ho an'ny besinimaro” ny Orina Mpanasoa Ensar, izay mifantoka amin'ny fanabeazana ara-pivavahana, sata ahazoan'ilay orina mpanasoa hahazo moramora kokoa fanampiana ara-bola avy amin'ny fanjakana.
Ankehitriny anisan'ireo orina mpanasoa manankarena indrindra any Torkia izy io, iray amin'ireo voasoratra ho mpanorina ny Ensar ny ben'ny tànanan'i Istanbul sy ny mpikambana ao amin'ny Antoko Rariny sy Fampandrosoana (AKP) Kadir Topbaş .
Ny Filoha Recep Tayyip Erdogan sy ny vadiny dia samy nikabary nandritra ny lanonana tao amin'ny Ensar vao haingana tamin'ny Febroary.
Lasa lavitra mihitsy aza ny zanak'izy ireo lahy, Bilal Erdogan, izay birao mpikambana ao amin'ny fikambanana rahavavin'ny Ensar antsoina hoe TURGEV nilaza vao haingana fa “ny olona ihaonako matetika indrindra manaraka ny vadiko dia ny Filohan'ny Filankevi-pitantanana [Ensar] İsmail Cenk Dilberoglu . “
[Hita amin'ny sary ny Praiminisitra tiorka Ahmet Davutoğlu]: “mijoro ho vavolombelona izahay fa manompo ny maha-olombelona sy ny firenena ny Orina Mpanasoa Ensar.”
Nomena trano maro sy boky am-pitiavana manakaiky ny 150.000 mandritra ny efa-taona ilay mpanao asasoa, ary nankatò ny fananganana tetikasa mitentina 500.000 dôlara ho fanohanana ny sampana isan-karazany ao amin'ny orina mpanasoa ny Minisiteran'ny Tanora sy ny Fanatanjahan-tena tamin'ny 2015.
Anisan'ny asa manokana sy servisin’ ny Orina Mpanasoa Ensar ny fanomezana fampianarana teny vahiny ho an'ny mpianatra, seminera, trano famakiana boky, saha fitsangatsanganana ary tolotra fanampiana ara-bola.
Ity lahatsary eto ambany ity dia notontosaina nandritra ny ora fampianarana nomen'ny orina mpanasoa. Ireo tovovavy manatrika ny fampianarana dia mihira ny hira nalaina avy amin'ny Bella Ciao! Ao anatin'ny hira namboarina izy ireo mankalaza ny fivavahana sy fifaliana amin'ny fandehanana mankany amin'ny moskea.
Fanafintohinana mitombo an-dalana mahatsiravina
Nanomboka ny fanadihadiana ny raharaham-panafintohinana fanararaotana ankizy rehefa niteny tamin'ny fianakaviany ny ratram-po niainany teo an-tànan'ny mpampianatra ny iray tamin'ireo lasibatr'i MB.
Ny fanadihadiana nataon'ny fanjakana no nivoahan'ny resaka fa farafahakeliny fanararaotana sivy hafa no nisy talohan'ny nandraràna ny haino aman-jery tsy hifandray tamin'ny loharanom-baovao ofisialy momba ny raharaha.
Maro no misalasala hoe MB ihany no nahavita izany fanamparam-pahefana izany, ary manolo-kevitra fa misy mpiasan'ny tetikasa mihoatra ny iray tafiditra amin'ity raharaha ity.
Ao amin'ny raharaha 45 heverina ho fanolanana ankizy, olona iray ihany no voampanga. Tsy vita izany ara antontanisa. #ChildAbusersProtectedInTurkey
Mitaky 600 taona ho an'i MB ny mpampanoa lalàna ary mifototra amin'ireo fanolanana maro sy ny heloka bevava hafa izany.
Tamin'ny fiaikeny ny heloka bevava nataony tao amin'ny polisy ny voampanga no nanambara hoe ‘mahaliana ahy ny lehilahy’. .
Fa nitatitra sy nilaza tamin'ny haino aman-jery elatra havia Sol ny iray tamin'ireo mpianany tamin'ny 23 martsa fa noteren'ny mpampianatra izy hijery vetavetam-biby.
Tsy MB no lehilahy voalohany misy ifandraisany amin'ny Orina Mpanasoa Ensar hiatrika fiampangana ho nanao heloka bevava ara-nofo.
Tamin'ny taona 2008, Zekai İşler, mpampianatra Fivavahana sy ny Lalam-pitondratena, sady Filohan'ny Sampana Orina Mpanasoa Çorum ihany koa, dia voaheloka efa-taona an-tranomaizina noho ny fanorisorenana ara-nofo nataony tamin'ny vehivavy mpianatra roa nanatrika fampianarana tao amin'ny Orina Mpanasoa Ensar .
Ary raha vao haingana tamin'ny volana Janoary tamin'ity taona ity, nampidirina am-ponja satria voalaza ho nanararaotra zazalahy roa i Mehmet Nuri Gezmiş, anisan'ny biraon'ny AKP ao an-tanànan'ny Rize, faritra atsinanan'ny Ranomasina Mainty .
Teo aloha izy niasa ho filohan'ny Orina Mpanasoa Ensar sampana tao Rize teo anelanelan'ny taona 2001 sy 2003.
Na dia teo aza izany zava-boarakitra fiandohan'ny fanafintohinana goavana indrindra amin'izy rehetra izany, dia mbola manohy ny fanohanany ny governemanta .
Nahazoana fanangonan-tsonian'olona efa ho 300.000 ny Minisitry ny Fianakaviana sy ny Politika Sosialy amin'izao fotoana izao, Sema Ramazanoğlu, raha niantso ny tranga fanolanana ho “tranga maningana tsy fahita” izay ” tsy afaka ho antony hanaratsiana ny orina mpanasoa mijoro amin'ny servisy ataony. “
Tamin'ny 23 Martsa, nolavin’ny AKP ny soso-kevitra nataon'ny mpanohitra hananganana komity parlemantera manadihady ny fihoaram-pahefana atao amin'ny ankizy talohan'ny nanaovan'ny mpiserasera Twitter ao Torkia tadion-tsioka ambanin'ny diezy “Arovana ny mpanararaotra ankizy ao Torkia”.
Ho fanairana manoloana ny ezaky ny governemanta hiaro ny Orina Mpanasoa Ensar, dia lasa nanjary lohahevitra manerantany malaza haingana tao amin'ny Twitter ny fanentanana.
Nifidy hanangana vaomiera hanadihady ny fanararaotana atao amin'ny ankizy ny antoko mpanohitra. Tsy manaiky ny Governemanta! #VoaharoNyMpanararaotraNyAnkizyAoTorkia
Torkia: Manakana hananganana ny komity parlemantera miady amin'ny fanararaotana ankizy ny vondrona Islamista mitondra.
Na dia nilaza ny “fanemoram-potoana ara-teknika fohy” aza ny gazety mivoaka isan'andro Sabah mpomba ny governemanta, dia azo inoana izany fa ny fanentanana no nanery ny governemanta AKP hanaiky marimaritra iraisana ara-politika tsy fanaony ​​sy nanaiky ny hananganana vaomiera.
Antenaina ny mpikambana 15, ao amin'ny vaomieran'ny antoko efatra, hahita vokatra sy hanao tolo-kevitra ao anatin'ny telo volana.
Tantaran'ny Vehivavy sy Miralenta farany